About-Hunan Puqi Machadka Qalabka Sahaminta Cilmiga Hawada
Sanadihii la soo dhaafay, wadar ahaan boqolaal milyan oo yuan ayaa lagu maal-galiyay cilmi-baarista iyo horumarinta mashaariicda cilmi-baarista sayniska iyo dhismaha kooxo tayo leh. U hoggaansanaanta yoolka istiraatiijiyadeed ee "dhiirrigelinta sayniska iyo teknolojiyadda iyo xoojinta hibada", Machadyada Puqi waxay iskaashi sameeyeen oo ay aasaaseen xiriir wadashaqeyn muddo-dheer la leh hay'ado badan oo cilmi-baaris cilmi-baaris qaran, kulliyado iyo jaamacado, waxayna qabteen dhowr mashruuc oo cilmi-baaris cilmiyeed oo heer qaran ah. Machadyada Puqi waxay si wada jir ah u aasaaseen "Saldhigga R & D Gaarka ah ee Gaarka ah ee Biyaha Qaranka 13-iyo-Shan-sano" oo ay la leeyihiin Harbin Institute of Technology; waxay si wada jir ah u aasaaseen "Saldhigga Iskaashiga Hal-abuurka Istiraatiijiyadeed ee Warshadaha-Jaamacadda-Cilmi-baarista" oo ay weheliso Jaamacadda Hunan University of Science and Technology; aasaas "Saldhigga Tababarka ee Warshadaha, Jaamacadda iyo Cilmi-baarista" oo lala yeesho Jaamacadda Changsha.
Puqi waxay ku dhawaaqday in ka badan 300 shati qaran iyo xuquuqda nuqul barnaamijyada.
Puqi wuxuu ku guuleystay abaalmarinta labaad ee Abaalmarinta Horumarinta Sayniska iyo Teknolojiyada ee Gobolka Hunan.
Puqi waxaa lagu abaalmariyay "indha indheynta qandaraasyada iyo adkeynta kalsoonida" shirkadda ay siisay gobolka Hunan iyo dowladda magaalada Changsha. Wax soo saarka Puqi waxaa loo dhoofiyay 108 dal.
Sanduuqa Wax-Soo-Saarka Cilmi-baarista ee Puqi ayaa la aasaasay.
Puqi wuxuu ku qornaa liiska noocyada CCTV.